घरघरको कथा भन्छ मेरो तिहार गीतले
२०७५ कार्तिक २२ बिहीबार ११:०१:००
गायिका सुनिता दुलाल विशेषगरी तिज गायिकाको रुपमा चिनिन्छन् । यद्यपि उनले स्वदेश गानदेखि लोक तथा लोकदोहोरी गीत पनि गाएकी छन् । अरुका एल्बममा खासै गीत नगाउने उनी आफै लगानी गरेर गीत गाउँछिन् । संख्याभन्दा पनि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने उनी मान्यता राख्छिन् । उनले तिहारलाई लक्षित गर्दै देउसी–भैलो गीत सार्वजनिक गरेकी छन् । ‘उज्यालो तिहार....’ मा सुनिताले प्रकाश सपुतसँग सहकार्य गरेकी छन् । देउसी–भैलो गीतसँग केन्द्रित रहेर गायिका दुलालसँग केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका नरेश फुयाँलले गरेको छोटो कुराकानीः
प्रायः तिजका गीत गाउने तपार्ईंले तिहारको गीत गाउनु भएछ नि !
मलाई सबैभन्दा धेरै मनपर्ने चाड नै तिहार हो । यही तिहारसम्बन्धी गीत लिएर आउँदा निकै खुसी लागिरहेको छ । तिहारमा देउसीभैले खेल्न आउँदा पनि मलाई खुब रमाइलो लाग्थ्यो । अरुको घरमा देउसी खेलेर हाम्रो घरमा आएनन् भने मलाई नरमाइलो लाग्थ्यो । तिहारको गीत मलाई प्रत्येक वर्ष गाउन मन थियो । तर तिजदेखि तिहारपछिसम्म नेपाल बाहिर नै बस्ने भएकाले गाउन सकेको थिइन । हुनत मैलै निकै पहिला तिहारको एउटा गीत गाएको थिएँ । त्यो गीत निकै राम्रो पनि थियो । त्यो समय युट्युब थिएन । क्यासेट किनेर अडियो सुन्ने जमाना थियो, त्यही भएर धेरैले सुन्न पाउनु भएन ।
फरक खालको गीत त्यो पनि तिहारको लिएर आउन पाउँदा म आफैलाई पनि रमाइलो लागेको छ । नयाँ अनुभव पनि संगाल्ने मौका पाएँ । विमोचन गरेर सार्वजनिक गर्ने सोच थियो । तर युट्युबबाट रिलिज गर्दा पनि सञ्चारमाध्यमले आफैँ खोजीखोजी कभरेज गरिदिनुभएको छ । निकै खुसी छु यो सहयोग र साथका लागि । जतिले गीत हेर्नु भएको छ, सबैले राम्रो भन्नु भएको छ । यसले झनै उत्साह प्रदान गरेको छ ।
सोचेजस्तै रेस्पोन्स पाउँदा तिजका मात्रै गीत गाएर गल्ती पो गरेँछु भन्ने लाग्यो ?
मलाई त्यो कहिले पनि लागेन । लोकदोहोेरी, लोक गीत पनि गाएकी छु । अहिले पनि कति गायकगायिका तथा कम्पनीहरुले गीत गाउनका लागि आग्रह गरिरहनु भएको छ । रियालिटी शोहरुबाट पनि मलाई‘जज’का लागि अफरहरु आइरहेका छन् । तर म आफूले आफैलाई ‘जज’ गर्ने हो पहिला । म ‘जज’ बस्न योग्य भइसकेको छु जस्तो लाग्दैन । म अहिले पनि सिकिरहेको छु र सिक्न अझै धेरै बाँकीनै छ ।
गीतको कुरा गर्दा संख्या बढाउनेभन्दा पनि जति गाइन्छ त्यो राम्रो होस् भन्ने मेरो चाहना हो । अरुको गीत गाउँदा कति शब्द मन पर्दैन, कतिको लयमा चित्त बुझ्दैन । त्यसैले अरुको ‘प्रेसर’मा काम गर्नुभन्दा आफै लगानी गरेर भनेजस्तो राम्रो गाउनु नै ठीक हो जस्तो लागेकाले पनि मैले अरुका गीत नगाएको हुँ ।
‘मलाई तपाईं तीज गीत गाउनुहुन्छ है?’ भन्दा मलाई आनन्द लाग्छ । तिहारपछि दोहोरी गीत गाउँदैछु । तयारी अवस्थामा छ । प्रकाश सपुतसँग गाउँदैछु ।
मौसमी गीत र अन्य गीतमा फरक के हुन्छ, गायन र लगानीका हिसावले ?
गायनका हिसावले सिजनल गीत गाउँदा फाइदा नै हुन्छ । दसैं, तिहार, तिजका गीत गाउँदा कार्यक्रमहरु धेरै हुन्छन् । त्यहाँ पर्व अनुसार आफ्नै गीत गाउन पाइन्छ । त्यस्ता कार्यक्रममा आफ्नै गीत गाउन पाउँदै खुसी लाग्छ ।
व्यावसायिक रुपमा हेर्दा अहिले युट्युबको समय छ । युट्युबमा जुनसुकै समयमा जुनसुकै गीत हेर्न सकिने भएकाले ‘भ्युज’कै आधारमा लगानी उठाउन सकिन्छ ।
फरक यति हो ‘पब्लिसिटी’ थोरै समय हुन्छ । तर, प्रविधिका कारण समयको सीमा छैन । त्यसैले बेफाइदा केही छैन मौसमी अथवा पर्व गीत गाउँदा पनि ।
प्रकाश सपुतलाई लिएर गीत गाउनु भयो, प्रकाशलाई अहिले बजारमा रुचाइएका बेला उहाँको लोकप्रियतालाई ‘क्यास’ गर्न खोज्नुभएको त हैन ?
प्रकाश सपुत र उहाँको लोकप्रियता आफ्नो ठाउँमा होला तर लाग्दैन मलाई दर्शक तथा स्रोताले चिन्नु हुन्न । उहाँलाई मसँग गीत गाउने पहिला देखि नै इच्छा रहेछ । मलाई पनि उहाँको रचना मनपथ्र्यो । नयाँ सर्जकमा उहाँ मलाई मन पथ्र्यो । उहाँ पनि मेरो फ्यान हुनुहुँदोरहेछ । उहाँले मसँग काम गर्नेमन छ भन्नुभयो । त्यसैले हामीले सँगै काम गरेका हौं ।
मलाई अब कसैसँग गाएर नयाँ परिचय स्थापित गर्नु छैन । यसको अर्थ मैले प्रकाश सपुतलाई नराम्रो भन्ने खोजेको होइन । प्रश्न अनुसारको जवाफमा यो प्रसंग आएको हो । म आफ्नै गीतले सुनिता दुलाल भइसकेको छु । दर्शक तथा स्रोताले मन पराइदिनु भएको छ । त्यो नै मेरा लागि ठूलो कुरा हो र म मेरा दर्शक तथा स्रोतालाई मलाई साथ र सहयोग गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ।
पछिल्लो समय चलचित्र हुन् या गीत वैदेशिक रोजगारीको कथा समेटिन्छ, तपाईं तिहार गीतमा पनि त्यो देखियो किन ?
चलचित्र हुन् या गीत समाजकै कुरा उठाउने हो । समाजमा रहेका समस्या र सफलता समेट्ने हो । त्यसैले समाजमा जे छ त्यही कुराभन्दा विदेशमा धन कमाउन रोजगारीका लागि जाने ठूलो संख्या छ हाम्रोमा । उहाँहरुको कथा समेट्नु हामी श्रष्टा तथा सर्जकको दायित्व पनि हो । त्यही भएर पनि यो विषय समेटिएको हो । समाजमा जे देखिन्छ र त्यसले सर्जकलाई छुन्छ त्यही विषय उठान गर्ने त हो । अहिले विदेशमा गएका नेपालीको कथा समेटिएको त्योभन्दा अर्को जल्दोबल्दो विषय आएको खण्डमा त्यो पनि समेटिन्छ ।
गीतमा दुई जनाले सहकार्य गर्नुभएको छ, केही फरक छ तिहारका आम गीतभन्दा ?
अरुसँग प्रतिस्पर्धाका लागि मैले गीत निकालेको होइन । गीत सुन्दा र हेर्दा नै धेरै कुरा थाहा हुन्छ । बच्चा देखि वृद्धवृद्धासम्मलाई समेटेको छु । तडकभडक छैन । कमेडी र उश्रृंखल पनि छैन । हेर्दा र सुन्दा आनन्द आउने, सबैले मन पराउने खालको गीत लिएर आएकी छु ।
गीत वास्तविक कथामा आधारित छ । विदेशिएका दाजुभाइको कथा छ । भाइले दिदीलाई दिने ‘सरप्राइज’ छ । गीतमा जति मेहनत छ । भिडियोमा पनि कुनै सम्झौता गरिएको छैन । फोर केमा खिचिएको छ । लक्ष्मी गिरी, शुरवीर पण्डित जस्ता अग्रज कलाकार भिडियोमा हुनुहुन्छ ।
तिहार गीत पनि विस्तारै व्यवसायिकतातर्फ ढल्किन थालेका हुन् ?
अहिलेसम्म तिहारको गीतमा चाहिँ त्यति धेरै विकृति आइसकेको छ जस्तो लाग्दैन । मौलिक गीत नै आइरहेका छन् । तिजको जस्तै तिहार गीत पनि व्यावसायिक बन्न गयो भने चाहिँ विकृति भित्रिएला । तर त्यस्तो नहोस् कामना गरौं । समग्रमा भन्दा अहिलेसम्म तिहारको पन मरेका छैन ।
गीत महङ्गो हुँदै गएको हो ?
हो, महङ्गो हुँदै गएको छ । पहिला कम्पनीका लागि कमाएर खाने ‘भाँडो’ बनेको थियो । तर अहिले युट्युब ‘भ्युज’का आधारमा लगानी भिडियोले उठाउँछ । मेरो आफ्नै कुरा गर्दा तिजको गीतमा जती लगानी गरेपनि युट्युबबाट लगानी उठिसकेको छ ।
नयाँ प्रविधिसँग कलाकार कत्तिको साक्षात्कार छन् ?
पछिल्लो समय धेरै कलाकारले आफ्नै युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ । आफ्नो गीत आफ्नै च्यानलबाट रिलिज गर्नुहुन्छ । त्यहाँबाट आउने पैसा आफैंले लिन थाल्नु भएको छ । केही वर्ष अगाडिसम्म रहेको अन्योल विस्तारै हट्दै गएको छ । त्यसैले ठगिन क्रम घटेको छ ।